Esi ewepu tomato stains | Bezzia
Tony Torres | 10/06/2021 10:00 | Emelitere ka 10/06/2021 11:01 | Home
Iwepu ntụpọ tomato nwere ike isi ezigbo ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ntụpọ dị na akwa dị nro ma ọ bụ na-ekwe ka ọkpọọ oke. Ime ihe ngwa ngwa dị mkpa iji kpochapụ ntụpọ tomato kpam kpam. Agbanyeghị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị hụghị unyi ahụ n'oge a ọtụtụ awa agafeela, yana ụfọdụ aghụghọ ọ ga-ekwe omume iwepụ ha kpamkpam.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche ụdị tomato ọ bụ nke mepụtara ntụpọ, ebe ọ bụ na tomato nkịtị abụghị otu ihendori tomato. Achịcha ndị Tomato dị ka ketchup, na mgbakwunye na ụta tomato, nwere mmanụ, ngwa nri, na mmanya ogbugbu. Ya mere usoro ị ga - agbaso ga-adịtụ iche na nke ọ bụla. Following ga-achọta ụfọdụ Atụmatụ iji wepụ tomato stains.
1 Wepu ahihia tomato
2 Aghụghọ iji wepụ eghe tomato stains
3 Atụmatụ ndị ọzọ
Wepu ahihia tomato
Tomato okike dị mfe iwepu, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ihe mgbakwunye nke na-eme ka ntụpọ ahụ sie ike. Otú ọ dị, usoro ahụ dị iche ma ọ bụrụ na ị na-anwa iwepu nsị tomato ọhụrụ, karịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ntụpọ akọrọ. Na nke mbụ ị ga-agbaso usoro ndị a:
Buru ụzọ wepu nri ndị ọzọ na ngajiỌ bụrụ na uwe ahụ siri ike, etinyela ike iji zere imebi eriri.
Debe uwe ahụ n'okpuru mmiri mmiri oyi, hapụ ya ka ọ na-agba ọsọ site n'ime uwe ahụ ruo n'èzí.
Tinye obere ihe nhicha Onye na-asacha efere ma jiri mkpịsị aka gị gụọ ya.
Itucha na mmiri oyi ruo mgbe a ga-ewepụ ụfụfụ nchara nchara.
Gaba na sụa uwe kwesịrị.
Ọ bụrụ na eke ntụpọ tomato asat, ịkwesịrị ịgbaso usoro ndị a iji kpochapụ ya kpamkpam.
Azu a akwa owu na mmanya di uku nhicha.
Kpachara anya, tinye na ntụpọ tomato ruo mgbe a ga-ewepụ ya kpam kpam.
Gaa jiri mpaghara dị iche iche nke akwa ahụNke a ga-egbochi tomato ịfefe n'akụkụ ndị ọzọ nke uwe ahụ.
Itucha na mmiri oyi ma sachaa ya n’ime igwe eji asacha ya.
Aghụghọ iji wepụ eghe tomato stains
Achịcha tomato juru eju nwere ihe karịrị otu ngwa nri, nke na-eme ka iwepụ ndị achọghị. uwe stains. Ngwa ngwa ị na-eme, o yikarịrị ka ị ga-ewepụsị ntụpọ tomato kpamkpam. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọpụta ntụpọ tomato e ghere eghe na uwe gị Ahapụla ya na nkata akwa ahụ na-eche ịsa. Soro usoro ndị a ma ị nwere ike wepu ntụpọ tomato na uwe gị.
Na onye nnata mix soda mmiri na obere mmiri. Ikwesiri inweta grasta mado iji kpochapu unyi.
Gbasaa soda mado na Unyi ma hapụ ihe dịka 15 nkeji.
Oge gafere, wepụ ngwakọta ma jiri mmiri oyi sachaa.
Tinyegharịa usoro ndị a ruo mgbe tomato ntụpọ kpamkpam.
N'ikpeazụ, sachaa uwe dika o kwesiri na igwe nhicha.
Ime ihe ngwa ngwa dị mkpa, mana ị nwere ihe ọghọm nke ịme mkpebi na-adịghị mma ma mee ka ọnọdụ ahụ ka njọ. Otu ihe mmuo nke mbu mgbe anyi nwetara unyi tomato bu iji akwa nhicha wepu foduru, ihe n’enweghi mgbagha. Napkin ahụ na-agbasakwa ntụpọ na na-enyere ya aka nke ọma site na eriri nke akwa.
Ọ ka mma na ndị a iji ngaji ma ọ bụ mma wepu nri nke foduru, na-enweghị ihe egwu nke nsị na-agbasa. Ikwesighi iji draya mgbe ị na-asacha akwa uwe gị,, ebe ọ bụ na okpomọkụ na-enyere ntụpọ aka idozi nke ọma na eriri nke akwa. Mgbe ị na-asa akwa ahụ, hapụ ya ka ọ kpoo na ndò iji gbochie okpomọkụ ịtọ ntọala ahụ ma mee ka o sie ike iwepu ya.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere ntụpọ tomato na uwe gị ma ọ nweghị aghụghọ ọ bụla nke baara gị uru, adala mba. Tupu ịnwale nhọrọ ndị ọzọ, ọbụna ụfọdụ ngwaahịa na-ehichapụ ngwaahịa na ahịa, chere iji wepu ngwọta gara aga. Nke ahụ bụ, sụọ uwe ahụ ma hapụ ya ka ọ kpoo kpamkpam. Mgbe ahụ ị ga - anwale aghụghọ ọ bụla n’enweghị nsogbu ọ bụla nke imerụ uwe gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Esi ewepu tomato stains